Facebook Posts | Camel
With the beginning of winter, the time has come to celebrate Tazaungdaing Festival,alovely tradition in Myanmar. It is also important to stay safe and take care of your health during the holidays amidst the pandemic. Camel International wishes youavery happy and healthy Tazaungdaing holiday with peace of mind. 🙏 ဆောင်းအငွေ့အသက်နှင့်အတူ မြန်မာတို့၏ချစ်စရာ ရိုးရာဖြစ်သော တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် အချိန်အခါသို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါသည်။ ယခုချိန်တွင် ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးကျရောက်နေချိန်ဖြစ်သောကြောင့် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ပိတ်ရက်များတွင် ကျန်းမာရေးကို အထူးဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ တန်ဆောင်တိုင် အခါသမယတွင် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံ၍ ကပ်ရောဂါ ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှ ကင်းဝေးပြီး ပျော်ရွှင်မှုအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသော အားလပ်ရက်များ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ‎ေကြာင်း Camel International မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်... 🙏 #Camel_International #Tazaungdaing_Wish
Office Staff (‌ယောကျာ်းလေး-၂ ဦး) အလိုရှိသည်။ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း Camel Factory တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် - ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - Computer Word, Excel အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - စာရင်းဇယားအနည်းငယ် ကိုင်တွင်နိုင်ရမည်။ - အစိုးရရုံးများသို့ ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည် - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ခန့်ရှိရမည် လစာညှိနှိုင်း ရုံးချိန် မနက် ၈:၃၀ မှ ညနေ ၅:၃၀ ပိတ်ရက်- တနင်္ဂနွေနှင့်အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက် CV form တင်ရမည့် လိပ်စာ - အမှတ် ၈၅, ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း, ဇုန် (၁), ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်, ရန်ကုန်မြို့။ Email address - camelmyanmarjob@gmail.com Viber No.- 09 420319713 Hotline No.- 09 977202156
We have contributed 𝐎𝐯𝐞𝐫 𝟐𝟐 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧 𝐊𝐲𝐚𝐭𝐬 in total towards the fight against Covid-19, since the beginning of the pandemic. We pray that Myanmar will have control over the Covid-19 outbreak as soon as possible and hopefully recover in the near future. Covid ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ယခုအချိန်ထိ တတ်စွမ်းသရွေ့ထည့်ဝင်လှူဒါန်းမှု ကျပ်သိန်းပေါင်းနှစ်ရာ့နှစ်ဆယ် ကျော်ပြီဖြစ်သော Camel International သည် 📌Steel King Co., Ltd သို့ Covid ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရာတွင် လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်စေရန် ကာလတန်ဖိုး ငွေကျပ် ၄၀၈၀၀၀၀ ကျပ်တိတိ တန်ဖိုးရှိသော Safe Plus Hand Sanitizer (1 Lit) ၁,၄၁၀ ဗူး၊ Safe Plus Hand Sanitizer (100 Ml) ၁,၄၀၀ဗူး၊ 📌Quarantine Center များတွင် အစားအသောက်များစီမံကျွေးမွေးနိုင်စေရန် ဒေါပုံမြို့နယ်၊ နွယ်‌အေးစွန်ဂျာမေဗလီ လူမှုကူညီရေးအသင်းသို့ အလှုငွေ ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ်တိတိ၊ 📌တာမွေမြို့နယ်ရှိ Community Base Facilities Quarantine Center သို့ နံနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညနေစာများ စီမံကျွေးမွေးနိုင်စေရေးအတွက် ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်တိတိ၊ 📌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဆေးတက္ကသိုလ် အမှတ်(၁) သို့ လိုအပ်သလို စီမံအသုံးပြုနိုင်စေရန် ကာလတန်ဖိုး ၄၃၀,၀၀၀ ကျပ်တန်းရှိ ကုတင် (၁၀) လုံး၊ 📌အောင်မဇ္ဇျိမာရုံပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ရှိ ဆရာတော်ဘုရားထံသို့ သို့ ဆရာတော်နှင့် စာသင်သားများ Covid ကာလအတွင်း ဆွမ်းမခက်စေရန် နဝကမ္မဆွမ်းပဒေသာအဖြစ် ငွေကျပ် ၁၇၀,၀၀၀ ကျပ်တိတိ၊ 📌ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် အာဟာရဒါနအဖြစ် ငွေကျပ်တန်ဖိုး ၁၈၇,၀၀၀ ကျပ်တိတိ တန်ဖိုးရှိ နေ့လည်စာ ထမင်းဗူး ၁၁၀ ဗူး အား လိုက်လံလှူဒါန်းဝေမျှခြင်း စသဖြင့် Camel International ၏ လှူဒါန်းမှု အချို့အား နတ်လူသာဓုခေါ်နိုင်စေရန် ဝေမျှဖော်ြပပေးလိုက်ရပါသည်။ #donation_of_CamelMyanmar #Camel_International
စွဲလမ်းမှုကို အပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်မည့် စားသောက်ကုန်သုံး လီမွန်သံပရာရနံ့ဆီ သာမာန်ထက်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး လတ်ဆတ်သင်းပျံ့သော လီမွန်သံပရာရနံ့ကို ပေးစွမ်းနိုင်မည့် စားသောက်ကုန်အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်မည့် လူကြီးမင်းတို့အတွက် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားသော စားသောက်ကုန်သုံး ရနံ့ဆီ (Flavour) နှင့် H.E.D အမှတ်တံဆိပ် လီမွန်သံပရာရနံ့ဆီများကို 1 Kg မှ စတင်ပြီး လိုအပ်သလောက်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်.... အနည်းငယ်အသုံးပြုရုံဖြင့် ထူးကဲသော ရနံ့သင်းသင်းလေးကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် အသုံးခံပြီး ထုတ်လုပ်မှုစားရိတ်ကိုသက်သာ စေပါသည်။￼ အသုံးပြုနိုင်သည့်နေရာများ - အချိုရည်ဖော်စပ်မှုများ၊မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်းများနှင့် အခြားသော အသုံးလိုသော စားသောက်ကုန်များတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အခြားရရှိနိုင်သော အမျိုးအစားစုံလင်သောရနံ့ဆီများကို www.CamelMyanmar.com တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Camel International Office: ☎️ 01 430 601 🔍No. 79(B), Kyaikkasan Road, Natmauk Ward, Tamwe Township, Yangon, Myanmar. 📧 marketing@camelmyanmar.com 🌐 www.CamelMyanmar.com
စွဲလမ်းမှုကို အပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်မည့် စားသောက်ကုန်သုံး ဂျင်ရနံ့ဆီ သာမာန်ထက်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ပြင်းရှသော ဂျင်ရနံ့ကို ပေးစွမ်းနိုင်မည့် စားသောက်ကုန်အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်မည့် လူကြီးမင်းတို့အတွက် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားသော စားသောက်ကုန်သုံး ရနံ့ဆီ (Flavour) နှင့် H.E.D အမှတ်တံဆိပ် ဂျင်ရနံ့ဆီများကို 1 Kg မှ စတင်ပြီး လိုအပ်သလောက်ဝယ်ယူရရှိ နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်.... အနည်းငယ်အသုံးပြုရုံဖြင့် ထူးကဲသော ရနံ့ကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် အသုံးခံပြီးထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကိုသက်သာ စေပါသည်။ အသုံးပြုနိုင်သည့်နေရာများ - အဖျော်ယမကာများ၊ ယမကာဖျော်စပ်မှုများ၊ မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်းများနှင့် အခြားသော အသုံးလိုသော စားသောက်ကုန်များတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အခြားရရှိနိုင်သော အမျိုးအစားစုံလင်သောရနံ့ဆီများကို www.CamelMyanmar.com တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Camel International Office: ☎️ 01 430 601 🔍No. 79(B), Kyaikkasan Road, Natmauk Ward, Tamwe Township, Yangon, Myanmar. 📧 marketing@camelmyanmar.com 🌐 www.CamelMyanmar.com
To find out how we can help your business by making your products better. Please call us or visit our newly designed website at https://camelmyanmar.com
Camel International wishes Happy Thidingyut Festival to everyone. #Myanmar_Language သီတင်းကျွတ်ရက်မြတ်အခါသမယတွင် မိသားစုများအားလုံး မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီး ကျန်းမာ ရွှင်လန်း အေးချမ်းကြပါစေကြောင်း Camel International မှ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါသည်။ #Thidingyut
Why Camel International? (English Language Video) We do not simply sell our products; we provide solutions, consultations, and tailors our products to best serve your business. Providing exceptional customer service is at the top most priority of Camel International. We are ISO 9001:2015 & HACCP Certified Organisation. In the food and beverages industry, Camel International is the first organisation in Myanmar to achieve these certificates. #camel_international #since_1968
#English_Language Since the Covid 19 outbreak started in Myanmar, Camel International have contributed over 16.5 Million Kyats towards the fight against the virus. #Myanmar_Language Covid - 19 ရောဂါကြောင့် လိုအပ်နေသော နေရာများတွင် Camel International မိသားစု၏ ကျပ်တစ်ရာခြောက်ဆယ့်ငါးသိန်းကျော်် ပါဝင်လှူဒါန်းမှုအစုစုတို့အား ဝေမျှဖော်ပြခြင်း ------------------------------- ရန်ကုန်တိုင်း သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွက် IDSM သို့လှူဒါန်းငွေကျပ် ၁၂,၇၀၀,၀၀၀၊ Covid ကာလအတွင်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် လင်းလက်လူမှုကူညီရေးအသင်းသို့ လှူဒါန်းငွေကျပ် ၁,၀၀၄,၅၀၀၊ Covid - 19 ကုသ‎ေရး Centre များသို့ Oxygen အသက်ရှုစက်များထောက်ပံ့ရေးအတွက် လှူဒါန်းငွေကျပ် ၆၀၀,၀၀၀၊ Fever Clinic များ ကျန်းမာရေး ဌာနများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာငွေကျပ် ၇၀၀,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ‎ေဆးဝါးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တိုက်ကြီးမြို့နယ်ရှိ Covid -19 ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးအတွက် လှူဒါန်းငေွကျပ် ၂၀၀,၀၀၀ နှင့် ကာလတန်ဖိုး မြန်မာငွေကျပ် ၇၇၂,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ Covid-19 ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တာမွေမြို့နယ်ရှိ အ.ထ.က (၃) တွင် ယာယီပြုလုပ်ထားသော Covid - 19 Quarrantine Center သို့ လှူဒါန်းငေွကျပ် ၅၀၀,၀၀၀၊ စသည်ဖြင့် အသီးသီး ပါဝင်လှူဒါန်းဆောင်ရွက်မှုများအား ဝေမျှပေးလိုက်ရပါသည်။ Covid - 19 ‎ေရာဂါရောဂါသည်လဲ အမြန်ဆုံး အမြစ်ပြတ်တိုက်ထုတ်နိုင်ပြီး စီးပွားလာဘ်လာဘများ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေကြောင်း Camel International မှ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါသည်။ #Covid_Donation #Fight_Covid #Camel_International
ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးမှ ကာကွယ်ပေးသူအဖြစ် မိမိကိုယ်ကို ဂုဏ်ပြုရင်း Profile Change တဲ့ 🎉Campaign လေးမှာ ပါဝင်လိုက်ကြရအောင်... သင်က မဖြစ်မနေ အပြင်ထွက်ရမယ့်အချိန်မှသာ အပြင်ထွက်ပြီး၊ အပြင်ထွက်တိုင်း Mask တပ်တယ်။ လက်ဆေးတယ်ဆိုရင်တော့ 🎉‘ဂုဏ်ယူပါတယ်’ သင်က ဒီကမ္ဘာကြီးကို ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးမှ ကာကွယ်ပေးနေသူတစ်ဦးပါ ဒါကြောင့် အပြင်ထွက်တိုင်း Mask တပ်ဖို့ မေ့နေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကိုပါ ဆက်လက်ပြန့်ပွားနေဆဲဖြစ်တဲ့ ရောဂါကြီးကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် ယခု Campaign မှာ ပါဝင်ရန်အတွက် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါ... သို့မှသာ ကျန်းမာသော အနာဂတ်များနှင့်အတူ ပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်မှာပါ.... #stay_safe #stay_at_home #profile_frame #campaign
လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ အခွင့်အေရး နဲ့အတူ Stay Home မှာ ဝင်ငွေတွေတိုးကြမယ်... ဒီလိုချိန် မသုံးမဖြစ် သုံးနေရတဲ့ လက်သန့်ဆေးရည်ဖြစ်တဲ့ Safe Plus ကို အများနဲ့မတူ 📌စျေးသက်သာစွာနဲ့ လက်လီ/လက်ကား ရောင်းချပေးနေတာကြောင့် 📍အပြင်ထွက်ချိန် 100 Ml ဗူးေလးေတွကို ကိုယ်နဲ့မကွာဆောင်ပြီး သုံးရင် ပဲဖြစ်ဖြစ် 📍အိမ်ပြန်ရောက်ချိန် 500 Ml ဗူးလေးတေွကို အသုံးပြုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် 📍ဗူးဆိုဒ်စုံကို ပြန်တင်ပြီးရောင်းရင်လဲ ဝင်ငွေတွေလဲတိုးပြီးရင်းတိုးဦးမှာဆိုတော့ အခုချက်ချင်းပဲ မှာယူလိုက်တော့နော်... Lock Down ကာလမှာလမှာလဲ အိမ်အရောက် ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ပို့ဆောင်ပေးသွားမှာမို့လို့ အခုပဲ Facebook Page Messenger (သို့) ☎Hot Line - 09 977 163 417 ကို ဆက်သွယ်ပြီး မှာယူလိုက်တော့‎ေနာ် #safe_plus #hand_sanitizer #stay_home #home_delivery
📣𝗦𝗮𝗳𝗲 𝗣𝗹𝘂𝘀 လက်သန့်ဆေးရည်လေးတွေ ဘယ်မှာဝယ်လို့ရမလဲ သိချင်နေကြတဲ့ 𝗦𝗮𝗳𝗲 𝗣𝗹𝘂𝘀 ချစ်သူတွေအတွက် 📌LifePlus Retail Outlets အားလုံးနဲ့ 📌Camel Retail Shops တွေမှာ 𝗦𝗮𝗳𝗲 𝗣𝗹𝘂𝘀 (Hand Sanitizer-1 Liter) ဗူးတွေကို ဝယ်ယူလို့ရတဲ့အပြင် ဆိုင်တွေမှာလာရောက်ဝယ်ယူဖို့ အဆင်မပြေတဲ့ 𝗦𝗮𝗳𝗲 𝗣𝗹𝘂𝘀 ချစ်သူတွေအတွက် 📣အိမ်အရောက် Delivery ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလဲရှိတဲ့အကြောင်း သတင်းကောင်းလေး ပါးပါရစေနော် Alcohol 75% ပါဝင်ပြီး၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကို 99.99% ကာကွယ်နိုင်တဲ့ 𝗦𝗮𝗳𝗲 𝗣𝗹𝘂𝘀 ရေမလို လက်သန့်ဆေးရည်ကတော့ ▪Refill ဗူးလေးတွေထဲ ထည့်သုံးလို့အဆင်ပြေ၊ ▪တန်လည်းတန်၊ သုံးလို့လဲကောင်း၊ ▪စေးကပ်ခြင်းမရှိ၊ ▪လက်အရေပြားကို ချောမွေ့စေပြီး၊ 🌿အနံ့လေးလဲမွှေးတဲ့ လက်သန့်ဆေးရည်လေးပါနော်... 📣ကိုဗစ်နိုင်တီး ဝေးဝေး Go ဖို့ 𝗦𝗮𝗳𝗲 𝗣𝗹𝘂𝘀 ကို ဆောင်ထားစို့ ဆိုတဲ့အတိုင်း ရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပိုးမွှားတွေ အလွယ်တကူ ကပ်မပါလာနိုင်အောင် အခုပဲ နီးစပ်ရာဆိုင်မှာ မြန်မြန်ပြေးဝယ်လိုက်ကြရအောင်နော် အိမ်အရောက်မှာယူလိုလိုတဲ့ Customers တွေအနေနဲ့ 📩Facebook Page Messenger (သို့) ☎Hot Line - 09 977 163 417 ကို ယခုပဲဆက်သွယ်မှာပါပြီရှင့် (🚛Delivery ပို့ဆောင်ခကတော့ မြို့နယ်အလိုက်အသီးသီးကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်)
မိသားစုဝင်တိုင်းအတွက် ကာကွယ်မှုအပြည့်အဝ ပေးနိုင်မယ့် Safe Plus ထုတ်ကုန်များ! ဒီလိုချိန်မှာ မိသားစုတစ်ခုလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ရောဂါပိုးမွှားတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကြိုတင် ကာကွယ်ထားနိုင်ဖို့က အရေးကြီးဆုံးပါပဲ မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်ရတဲ့ အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်ကနေ အိမ်ကို ပြန်ဝင်တဲ့ အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုးမွှားတွေ အလွယ်တကူ မဝင်ရောက်နိုင်အောင် Safe Plus က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ သင်ချစ်ရတဲ့ မိသားစုကို ပိုးမွှားများရန်မှ ကာကွယ်မှုအပြည့်အဝပေးပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုလေးကို ဖန်တီးလိုက်ပါနော် Safe Plus မှ ရရှိနိုင်တဲ့ ထုတ်ကုန်များကတော့ - ပိုးမွှားများကို 99.99% ထိသေစေနိုင်သော ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည် (Hand Sanitizer) များကို 📌100 ML 📌500 ML, 📌1 Liter 📌5 Liter,📌 20 Liter နှင့် Virus အမျိုးမျိုးကို % အပြည့် ကာကွယ်ပေးနိုင်သော Methanolated Spirit (အရက်ပြန်ဆေးရည်) များကို 📌1 Liter 📌5 Liter 📌18 Liter ထုတ်ပိုးမှုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ရောင်းချပေးနေတာကြောင့် မိသားစုအတွက် ပဲဖြစ်ဖြစ် စက်ရုံအလုပ်ရုံ၊ ရုံးခန်း၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွေအတွက် ပိုးသန့်စင်ဖို့အတွက် Safe Plusကို မှာယူအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ Safe Plus ထုတ်ကုန်များကို လက်လီ/လက်ကား မှာယူလိုသူများအနေနှင့်- Ph – 01 430 601 Address - No. 79(B), Kyaikkasan Road, Natmauk Ward, Tamwe Township, Yangon, Myanmar. သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းမှာယူနိုင်ပါပြီရှင်.... အရည်အသွေးကောင်းပြီး စျေးနှုန်းချိုသာတဲ့ Safe Plus ထုတ်ကုန်များကို အိမ်‌‌ရှေ့အရောက် ပို့ဆောင်ပေးသွားမှာပါ...
Mask နဲ့ ကာကွယ်ထားရုံနဲ့ လုံလောက်ရဲ့လား? ကျွန်မတို့တွေ Covid ကာလ မှာ အပြင်သွားတိုင်း Mask တပ် Face Shield တွေတပ် အိမ်ပြန်ရောက်မှ လက်ဆေးဖြစ်ကြတယ် ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မှု တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာ ပိုးမွှားတွေ ကပ်ပါလာပြီး ကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုတာကို အားလုံးလဲ သိထားပြီးသား ဖြစ်မှာပါ ဒါပေမယ့် ကူးစက်မှုတွေ များလာနဲ့အမျှ လက်လေးမဆေးဖြစ်ယုံနဲ့ မကူးနိုင်လောက်ပါဘူးဆိုပြီး ကျွန်မတို့တွေ မေ့ချင်ယောင်ဆောင်နေဖို့ မသင့်တော့ပါဘူးနော် မိမိအပြင် မိမိချစ်ခင်မြတ်နိုးရသူတွေအတွက် မဖြစ်မနေ အပြင်ထွက်ရတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုင်ပြီးတိုင်း လက်သန့်ဆေးရည်နဲ့ သန့်စင်ဆေးပြီး Covid အပြင် အခြားသော ရောဂါပိုးမွှားတွေ အလွယ်တကူ မဝင်ရောက်နိုင်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် ပိုးမွှားတွေရန်က ကာကွယ်မယ်ဆိုရင်တော့ Alcohol 75% ပါဝင်တဲ့ Safe Plus ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်ကို အသုံးပြီး ပိုးမွှားတွေရန်ကနေ 99.99% ကာကွယ်လိုက်ရ‌အောင်နော် Safe Plus ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်များကို ထုတ်ပိုးမှုပုံစံ- 📌100 ML Spray Type က စလို့ 📌500 ML, 📌1 Liter 📌5 Liter, 📌20 Liter ထိ ရရှိနိုင်တာကြောင့် အပြင်ထွက်ချိန်မှာ အိတ်ဆောင်အနေနဲ့ အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေ အရာဝတ္ထုတွေပေါ်မှာပါ ပိုးသတ်ဖို့လည်း အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေမှာပါ ပိုးသတ်ဖို့အတွက် Safe Plus Hand Sanitizer များကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ မှာယူအသုံးပြုနိုင်ပါပြီရှင် Safe Plus Hand Sanitizer မှာဆိုရင်တော့ Vitamin E ပါဝင်တာကြောင့် အစိုဓါတ်ကိုထိန်းပေးထားနိုင်ပြီး လက်အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းများမှလဲ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင် အမွှေးရနံ့ 1% ပါဝင်တာကြောင့် သင်းပျံ့သော မွှေးရနံ့နှင့်တူ စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းမှုကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုအကျိုးအာနိသင်များစွာရရှိနိုင်တဲ့ Safe Plus ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်များကို စျေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ အိမ်အရောက်ပို့ဝန်ဆောင်မှုပေးတာကြောင့် လက်လီ/လက်ကား မှာယူလိုသူများအနေနှင့်- ☎Ph – 01 430 601 📍Address - No. 79(B), Kyaikkasan Road, Natmauk Ward, Tamwe Township, Yangon, Myanmar. သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းမှာယူနိုင်ပါပြီရှင်
Camel International ၏ Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတ္ငင် အသုံးပြုနိုင်ရန် လှူဒါန်းမှု -------------------------------------------------------------------------- ကျွန်ုပ်တို့ Camel International သည် Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တိုက်ကြီးမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးသို့ PPE၀တ်စုံ - ၁၀ စုံ Hand Sanitizer (20 Liter) - ၅ ပုံး Hand Sanitizer (5 Liter) – ၁၀ ပုံး Hand Sanitizer (500 ML) – ၂၀ ပုံး Ethanol (AL) (1 Liter) - ၁၀ ပုံး Ethanol (AL) (5 Liter) - ၃ ပုံး Face Mask – ၅၀ ဗူး (စုစုပေါင်း ကာလတန်ဖိုးကျသင့်ငွေ - ၇၇၂,၀၀၀ ကျပ်တိတိ) အား လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည် ယခုကဲ့သို့လှူဒါန်းမှုကြောင့် နိုင်ငံအနှံ့အလျင်အမြန်ပြန့်နှံ့နေသော Covid-19 ရောဂါများအား လျှင်မြန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါသည် #covid_19_donation #camel_intermational #safe_plus
လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ပျောက်သွားမှာမဟုတ်တဲ့ ကြောက်စရာကောင်းပြီး ကူးစက်နှုန်းမြန်တဲ့ Covid-19 ကို ဆက်လက်ပြီး အတူယှဥ်တွဲ ကာကွယ်ကြပါစို့! ၂၉.၀၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့ အတည်ပြုချက်များအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Covid-19 ကူးစက်ခံထားရသူ အတည်ပြုလူနာ ၆၅၆ ယောက် ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ WHO မှ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့ ပြောစကားအရ Covid-19 ဟာ လွယ်လွယ်နဲ့ ပျောက်ကင်းသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်ပြီး ရင်ဆိုင်ရမယ့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး ကိစ္စတွေအတွက် Covid-19 ဟာ ရန်သူတစ်ယောက်ပါပဲ တိုက်ထုတ်လို့ မရတဲ့ ရန်သူကို မိမိဘက်က တတ်အား‌သရွေ့ ကာကွယ်ထားပြီး အဆင်ပြေအောင် ယှဥ်တွဲနေထိုင်ကာ ဆက်လက်တိုက်ထုတ်ကြရပါမယ် ဘယ်လိုဆက်လက်ပြီး အဆင်ပြေအောင် ယှဥ်တွဲနေထိုင် ကာကွယ်နေထိုင်သင့်သလဲဆိုရင်တော့- ၁။ အိမ်ပြင်ထွက်တိုင်း နှာခေါင်းစည်းတပ်ပါ။ ၂။ နေကာမျက်မှန် မျက်လုံးကာ မျက်နာကာ တပ်ပါ။ ၃ ။ အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုင်ပြီးတိုင်း လက်ကို ဆပ်ပြာဖြင့် စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောပါ။ အိမ်သူအိမ်သားများနှင့် အိမ်မှာရှိတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကိုယ်ခံအားမကောင်းသူ၊ နာမကျန်းသူတွေကိုပါ Covid-19 အလွယ်တကူ မကူးစက်စေရန်အတွက် အပြင်မှ ပြန်ရောက်တိုင်း အဝတ်အစား အသုံးအဆောင်များအား ပိုးသတ်ဆေးဖြင့် သန့်စင်ဆေးကြောပါ။ ၄။ လူထူထပ်တဲ့နေရာ ပွဲလမ်းသဘင် တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် မလိုအပ်ဘဲ အပြင်မထွက်ပါနှင့်။ ၅။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အနီးကပ် နေခြင်း၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် စကားပြောခြင်း ကို ရှောင်ကျဥ်ပါ။ ၆။ ဖျားနာ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး လူနာများကို ရှောင်ပါ။ ၇။ ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် မွေးမြူပါ။ ကိုယ်ခံအားကောင်းနေသရွေ့ Covid-19 မှ အလွယ်တကူ မဝင်ရောက်နိုင်ပါ။ ၈။ အသားငါးများအား အစိမ်းစားခြင်း မကျက်တကျက် စားခြင်း မီးကင်စားခြင်း တို့မှ ရှောင်ကျဥ်ပါ။ ဒီလိုအချက်အလက်တွေကိုသာ စနစ်တကျလိုက်နာ ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Covid-19 ကပ်ရောဂါ ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာမြေမှ အလျင်မြန်ဆုံး ထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Camel International မှ Covid-19 မြန်မာနိုင်ငံမှ အမြန်ဆုံးထွက်ခွာပြီး စီးပွားလာဘ်လာဘများတိုးတက်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည် #Covid #Camel_International
Why you should trust Camel International? Cause we are HACCP & ISO 9001 : 2015 Certified company. We proud to be awarded HACCP & ISO 9001 : 2015 certifications, an internationally recognized standard that ensures that our products and services meet the needs of our clients through an effective quality management system. We'll continuously challenge ourselves to provide our services that meet or exceed the needs and expectations of our customers. Special thanks to all business that have been worked together with us with confidence.
We look forward to working together with you in the future. For more informations: 🌍: http://www.CamelMyanmar.com
☎: +951 430 601
📌: No. 79(B), Kyaikkasan Road, Natmauk Ward, Tamwe Township, Yangon, Myanmar. Send enquiries to
📩 : Marketing@CamelMyanmar.com
လက်ရှိ တစ်ကမ္ဘာလုံးအရေအတွက်နှင့် ပြန့်ပွားလျှက်ရှိသော COVID-19 နှင့် ကူးစက်မှုဒုတိယလှိုင်း အတွက် ဆက်လက်ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ကြရအောင်... တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် COVID-19 မှာ ဆက်လက်ပြန့်ပွားလျှက်ရှိပြီး ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေမှာ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာဦးရေ စုစုပေါင်း (၁၈,၆၁၄,၁၇၇) ဦးနှင့် သေဆုံးသူဦးရေ စုစုပေါင်း (၇၀၂,၆၄၂) ဦး ရှိပါတယ်... ဤကဲ့သို့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် COVID-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားသေဆုံးမှုများ ဆက်လက်များပြားလျက် ရှိသောကြောင့် အများပြည်သူများအနေဖြင့် ပေါ့ဆမှု (လုံးဝ) မရှိဘဲ အောက်ပါအချက်များကို ဆက်လက် လိုက်နာကျင့်သုံးကာ မြန်မာနိုင်ငံ၌ COVID-19 ကူးစက်မှုဒုတိယလှိုင်းအား ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်- - လက်တွင်ကပ်ပါလာနိုင်သော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို ပျက်စီးစေရန်အတွက် လက်ကို ဆပ်ပြာနှင့်ရေ အသုံးပြု၍ အနည်းဆုံး စက္ကန့် (၂၀) ကြာအောင် ဆေးကြောပါ။ - (လိုအပ်၍) အပြင်ထွက်ပါက၊ လူစုလူဝေးရှိသည့်နေရာများသို့ သွားသည့်အခါတိုင်း လက်သန့်ဆေးရည်ကို စနစ်တကျ သုံးစွဲပါ။ - ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (mask) ကို စနစ်တကျ မပျက်မကွက် တပ်ဆင်ပါ။ - တတ်နိုင်သမျှ လူစုလူဝေးရှိရာ နေရာများသို့ မလိုအပ်ဘဲ (လုံးဝ) မသွားကြပါရန်နှင့် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး တတ်နိုင်သမျှ ခပ်ခွာခွာ နေထိုင်ကြပါရန်။ ဖြစ်နိုင်ပါက အနည်းဆုံး (၆) ပေ အကွာမှသာ နေထိုင်ပြောဆိုဆက်ဆံပါ။ - တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦီး ထိတွေ့ကိုင်တွယ် နှုတ်ဆက်ခြင်းများ တတ်နိုင်သမျှ မပြုလုပ်ပါနှင့်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးမှ လွတ်မြောက်ပါစေကြောင်း Camel International မှ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါသည်။ #crd_Ministry_of_Health_and_Sports, #UnionMinisters_Message, #MoHS, #COVID19, #ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်
(#English_Language_Below) (#Myanmar_Language) မြန်မာတို့၏ မဂႅလာကျက်သရေ အပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသော ၀ါဆိုလပြည့် ဓမ္မာစကြႅာ အခါတော်နေ့တွင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ၍ လိုအင်ဆန္ဒများ ပြည့်စုံပါစေကြောင်း Camel International မှ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါသည်... (#English_Language) Camel International wishes you good health and fulfillment of your desires on the full moon day of Warso. May you and your family haveawonderful holidays fill with love. #Camel_International #Full_Moon_Day_of_Warso
We wish youavery Happy Eid-Al-Adha. Wishing youacheerful and spiritual Eid Al Adha Mubarak. #Camel_International #Eid_Al_Adh
Why Camel International? We do not simply sell our products; we provide solutions, consultations, and tailors our products to best serve your business. Providing exceptional customer service is at the top most priority of Camel International. We are ISO 9001:2015 & HACCP Certified Organisation. In the food and beverages industry, Camel International is the first organisation in Myanmar to achieve these certificates. #camel_international #since_1968